Akụkọ - Ịmepụta usoro maka eriri carbon
Akpụ usoro maka carbon eriri
Usoro nhazi nke eriri carbon gụnyere usoro ịkpụzi, Usoro mgbanaka aka, usoro ịgbanye oghere na-ekpo ọkụ, usoro ịkpụzi ikuku, na usoro ịkpụzi pultrusion.Kacha nkịtị usoro bụ ịkpụzi usoro, nke tumadi na-eji na-eme ka carbon eriri akpaaka akụkụ ma ọ bụ carbon eriri ulo oru akụkụ.
N'ahịa, a na-emekarị tubes anyị na-ahụ site na usoro ịkpụzi.Dị ka gburugburu carbon eriri tubes, carbon square mkpara, octagonal booms na ndị ọzọ shapes tubing.All udi carbon eriri tubes na-mere site metal ebu, na mgbe ahụ mkpakọ ịkpụzi.Ma ha dịtụ iche na usoro mmepụta.Isi ihe dị iche bụ imeghe otu ebu ma ọ bụ abụọ ebu.N'ihi na gburugburu tube adịghị enwe nnọọ mgbagwoju anya etiti, na-emekarị, ọ bụ naanị otu ebu bụ iji chịkwaa ndidi nke ma n'ime na elu akụkụ.Na mgbidi dị n'ime na-adị ire ụtọ.mgbe carbon eriri square tubes na ndị ọzọ shapes nke ọkpọkọ, ma ọ bụrụ na-eji naanị otu ebu, ndidi na-emekarị adịghị mfe ịchịkwa na esịtidem akụkụ bụ nnọọ ike ike.Ya mere, ọ bụrụ na onye ahịa enweghị ihe dị elu chọrọ banyere ntachi obi na akụkụ dị n'ime, anyị ga-akwado ka onye ahịa na-emepe ihe dị n'èzí.Ụzọ a nwere ike ịchekwa ego.Ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwekwara ihe ndị a chọrọ maka ntachi obi n'ime, ọ kwesịrị imeghe ime ime na n'èzí iji mepụta.
Nke a bụ mmalite mmalite maka usoro nhazi dị iche iche maka ngwaahịa fiber carbon.
1. Usoro ịkpụzi.Tinye Prepreg resin n'ime ihe ọla, gbanye ya ka ọ na-ejupụta gluu ndị ọzọ, wee gwọọ ya na okpomọkụ dị elu iji mepụta ngwaahịa ikpeazụ mgbe ọ kwụsịrị.
2. A na-ebelata mpempe akwụkwọ carbon fiber nke a na-etinye na gluu ma tinye ya, ma ọ bụ na-ehichapụ resin ahụ mgbe ọ na-edobe ya, wee kpoo ọkụ.
3. Vacuum akpa usoro ịpị ọkụ.Laminate na ebu ma kpuchie ya na ihe nkiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, pịa laminate na obere akpa dị nro ma mee ka ọ sie ike na autoclave na-ekpo ọkụ.
4. Usoro ịkpụzi ikuku.The carbon fiber monofilament na-emerụ na carbon fiber aro, nke kwesịrị ekwesị maka ime carbon fiber tubes na oghere carbon eriri ngwaahịa.
5. Usoro mgbapu.A na-etinye eriri carbon ahụ kpamkpam, a na-ewepụ resin na ikuku site na pultrusion, wee gwọọ ya n'ime ọkụ.Usoro a dị mfe ma dabara adaba maka ịkwadebe mkpanaka eriri carbon na akụkụ tubular.